आज भ्यालेन्टाइन्स डे; कसरी सुरु भयो यो पर्व मनाउन (हेर्नुहोस बिस्तृतमा) -
महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले गरे डोजरमा आगजनी दुप्चेश्वर मन्दिरको क्षेत्रगत विकासको अवस्था, त्रुटी र सम्भावनाहरु वामदेवले मागे प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा संसद विघटनको निर्णय बदर गरिए संगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला ? संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर (पूर्णपाठ सहित)
आज भ्यालेन्टाइन्स डे; कसरी सुरु भयो यो पर्व मनाउन (हेर्नुहोस बिस्तृतमा)
अखबार पाटी २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ११:२५
२ फाल्गुन नुवाकोट,
आज प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे, नेपासहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ ।
सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १४ लाई विश्वभरिका थुप्रै देशहरूमा भ्यालेन्टाइन्स डे अर्थात् प्रणय दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।
विशेषगरी युवायुवतीले प्रेम प्रस्ताव राख्ने र आपसमा प्रेमभाव प्रस्तुत गर्ने पर्वको रुपमा प्रणय दिवस मनाइन्छ । यस दिन युवायुवतीले प्रेमको प्रतीक रातो गुलाबको फूल उपहार दिएर प्रेमभाव साटासाट गर्दछन् । युवापुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको यो दिवसमा युवायुवतीहरुले प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रुपमा लिने गरेका छन् ।
हुन त केही नेपालीहरू हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा पनि प्रेम दिवस भएको र त्यो कृष्ण अष्टमी भएको तर्कमा जोड दिन्छन् । त्यसैले अर्काको संस्कृति अनुसार प्रणय दिवस अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउन नहुने तर्क राख्छन् ।
तर पनि भ्यालेन्टाइनले नेपाली समाजमा पनि जरो गाड्दै छ । १४ फेब्रुवरीका दिन मनाइने यो दिवसमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेम सन्देशहरू लिने दिने र जीवनसाथी नै रोज्ने पनि गरिन्छ ।
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ के हो र कसरी सुरु भयो ?
फेब्रुअरी १४ Saint Valentine’s Day सामान्यतया: Valentine’s Day को रुपमा प्रख्यात दिन हो । सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १४ लाई विश्वभरिका थुप्रै देशहरूमा भ्यालेन्टाइन्स डे अर्थात् प्रणय दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।
भ्यालेन्टाइन्स डेको पछाडि एउटा दुःखद इतिहास लुकेको छ, जुन हामीमध्ये कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । यो दिन सुरु हुनुको पछाडि भ्यालेन्टाइनको देन त छ नै तर भ्यालेन्टाइन को हुन् ?र उनको के योगदानले गर्दा यो दिनलाई विशेष रूपमा मनाउन थालियो भन्ने कुरामा भने थुप्रै विचारहरू भेटिएका छन् ।
खासमा तेस्रो सताब्दीमा रोममा एक शासक थिए, जसको नाम क्लोडियस । उनको मान्यता थियो, जब बिहे गरिन्छ पुरुषको शक्ति र बुद्धि नष्ट हुन्छ । त्यही कारण उनले राज्यमा यस्तो उद्घोष गरिदिए, ‘आजदेखि कुनैपनि अधिकारी वा सैनिकले बिहे गर्न पाउनेछैन ।’
तर, सन्त भ्यालेनटाइनलाई क्लोडियसको यो कुरा पटक्कै मन परेन । उनले फरमानको विरोध गरे । सन्त भ्यालेनटाइनले सबैलाई बिहे गर्नका लागि उक्साए । जागरुक गराए । यहि क्रममा केहि अधिकारी र सैनिकले बिवाह गरे ।
जब क्लोडियसलाई सन्त भ्यालेनटाइनले आफ्नो मान्यता विपरित प्रेम र बिवाहका लागि अरुलाई प्रेरित गरे, भ्यालेनटाइनलाई बन्दी बनाउने आदेश जारी भयो । उनलाई कालकोठरीमा बन्दी बनाइयो ।
राजाले सन् २६९ को १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेनटाइनलाई फाँसी दिए । यहि दिनलाई भ्यालेनटाइनको समर्पणमा मानिसहरुले भ्यालेनटाइन डे मनाउन सुरु गरिएको बिस्वास मा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले गरे डोजरमा आगजनी
दुप्चेश्वर मन्दिरको क्षेत्रगत विकासको अवस्था, त्रुटी र सम्भावनाहरु
सुर्य चिन्ह हाम्रो भईसक्यो घोषणा हुन मात्र बाँकी: प्रचण्ड
पहिलो लेगमा बायर्नको सहज जित
दुप्चेश्वर मन्दिरको क्षेत्रगत विकासको अवस्था, त्रुटी र सम्भावनाहरु 26 views
महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले गरे डोजरमा आगजनी5views
कोरोना कहर थप ९ जना मा कोरोना पुस्टि,3views
बोराभित्र युवतीको शव फेला3views
महिला कैदीको मृत्यु2views
लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको अभियानमा दुप्चेश्वरको प्रतिवद्धता (कार्यक्रमको तस्बिर सहित)2views